Xildhibaan Geesey oo Xilkii Wasiirnimo iska casilay maanta – Kalfadhi
Wasiirka Hawlaha Guud iyo Guriyeenta Soomaaliya, Xildhibaan Cabdifitaax Ibraahin Geesey, ayaa sheegay inuu isaga casilay Xilkiisii Wasiirnimo xaaladda siyaasadeed ee Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS) ka taagan darteed. Waxaa, isaga oo sababeynaya xil ka tagistiisa, uu tixay arrimaha keenay inuu is casilo, waxa uuna sheegay saddexa qodob oo kala ah:
1) Dowladda oo uusan ogeyn meel ay ku gaartay go’aan lagu faragalinaayo KGS iyo Maamulada kale ee dalka
2) Maamulka KGS oo uusan ogeen meel uu go’aan uga gaaray in Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) laga reebo Doorashada, lana xiro oo Muqdisho loo soo taxaabo iyo
3) Ineysan jirin meel ay Dowladdu ku go’aamisay inaan lala tashan dadka KGS ku matala Dowladda Dhexe
Xildhibaan Cabdifitaax Geesey waxa uu xarigga Mukhtaar Roobow ku sifeeyey qafaal iyo af-duub, isaga oo xaaladda ka taagan KGS-na ku tilmaamay caburin uusan ogeen meel lagu go’aamiyey. Ineysan Dowladdu waxba kala socodsiin Xildhibaannada, Wasiirrada, Siyaasiyiinta iyo Bulshada inteeda kale go’aannada ay ka qaadaneyso KGS ayuu sheegay Geesey iney ku kaliftay inuu is casilo.
“Iyada oo ay muuqato in la hareer maraayo dastuurka dadka u degsan, shuruucda dalka iyo xeerarka dalka u yaala ayaan go’aansaday inaan xilkaan iska casilo” ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax Geesey. Sida uu hadalka u dhigay, waxa uu sheegay in sababta kale ee uu xilka isaga casilay ay tahay inuusan marqaati ka ahaan wax uu ugu yeeray “Dulmi iyo Dhibaato” uu sheegay in lagu haayo Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya uu ku shaqeyn doono Xildhibaannimo. Hase ahaatee, Geesey waxa uu mahadnaq iyo bogaadin u jeediyey Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, inuu Wasiir ka soo ahaa Xukumaddiisa darteed.